यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे ! – Online Nepal Site
मुख्य पृष्ठ /Intresting/यसरि मृत्यु भैदियो कि रुनु कि हाँस्नु ? भए मान्छे !
गु’डिरहेको कारबाट भि’डियो खि’च्दाखिच्दै ख’सिन् महिला